नियम & अवस्था-50% मिलाउनु दैनिक £ 250 |
नियम & अवस्था-50% मिलाउनु दैनिक £ 250
नियम & अवस्था:
यो पदोन्नति बीच सक्रिय हुनेछ 00:01 र 23:59 9ध, 10औं र 11 औं डिसेम्बर 2016 (GMT).
एक बोनस 50% £ 250 को अधिकतम आफ्नो पहिलो जम्मा प्रत्येक दिन अप (£ 750 सारा प्रचार अवधिमा) प्लेयर खाता थपिनेछ
खेलाडी बढावा अवधि प्रत्येक समयमा एक पटक योग्य योग्य छन्.
बोनस क्रेडिट भित्र आफ्नो खाता गरिनेछ3पदोन्नति को अन्त को काम दिन.
30x को मानक wagering आवश्यकताहरु बोनस रकम बोनस अघि लागू वा कुनै पनि संगत winnings फिर्ता लिया गर्न सकिन्छ.
Winnings बोनस बन्द 4x बोनस रकम capped छन्.
एक पटक आफ्नो बोनस लागि मान्य रहन्छ जम्मा 28 दिन.
तपाईं यो अवधि मा wagering आवश्यकताहरू पूरा हुँदैन, बाँकी बोनस रकम आफ्नो खातामा हटाइने.
खेलाडी मात्र एक बोनस कुनै एक समयमा सक्रिय हुन सक्छ भनेर सम्झाइन्छ.
कृपया जानुहोस् “मेरो खाता इतिहास” आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बोनस लाम समीक्षा गर्न खण्ड.
नियम र प्रतियोगिताको को स्थितिहरु- जीत स्मार्टफोन
नियम र सर्तहरू – मंगलवार मिलान –…